Dr. Abiyyi Imala Chaayinaa fi Eertiraa Booda Ibsa Kennan
Fulbaana 06, 2018
Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimed, ka Chaayinaatti geggeessame walga’ii Chaayinaa fi biyyoota Afrikaatti eega hirmaatanii booda, deebii isaanitti gara Ertiraatti goranii, har’a ennaa dirree xayyyaaraa Boolee gahanitti, gaazzexeessotaaf ibsa kennanii jiran.
Walga’ii Chaayinaatti geggeessame sana irraa faayidaa argame ennaa ibsan, “liqaalee tokko tokko irratti sirreessi hagi tokko akka godhamu taasisuuf carraa argannee jirra. Keessumaa, hadiida Baaburaa Finfinneedhaa haga Jabuutiitti diriirfamu gama ilaallateen, liqaan silaa waggaa kudhanitti kaffalamu gara waggaa soddomaatti akka dheeratu taasisamee haara-gaalfiin tokko akka argamu tahee jira. Kana malees, gama ijaarsa humna namaa fi piroojektoota tokko tokko irratti sirreessa liqaa gochuu fi gargaarsa bal’isuu irratti walii-galamee jira.” jedhan – Dr. Abiyyi.
Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa fi jilli isaanii yeroo Chaayinaa dhaa deebi’an, gara Ertiraatti goruudhaan, Prezidaantii Ertiraa – Isaayyaas Afewarqii wajjiin wal-arganii – buufataalee Asab fi Mitsiwwaa ka daawwatan yoo tahu, magaalaa Asmaraattis marii geggeessanii jiran. Kana ilaalchisees, gaazzexeessotaaf ibsa kennanii jiran – Dr. Abiyyi.
“Itiyoophiyaa Ertiraa wajjiin akkasuma, ka duraan jalqabne – hariiroo biyyoota lameenii lafa qabachiisuuf, gara hojiitti jijjiiruuf, Asab, Mitsiwwaa fi Asmaraa daawwachuu dandeenyee jirra. Yeroo Asab turretti, qophiilee haga ammaatti godhamanii fi yeroo dhihootti, buufaticha bananii hojii jalqabuuf qophiilee taasisaman gamaaggamuuf, sadarkaa inni irra jiru ilaaluuf carraan argamee jira. Hojiilee isaa hafan, yeroo xiqqoo keessatti xumurree, haala yeroo dhihootti hojii jalqabuu nu dandeessisu irra jiraachuu keenya arginee jirra. Yeeroo Mistiwwaa turretti, dooniin Itiyoophiyaa isheen duraa mi’a fe’attee gara Chaayinaa deemtu arginee jirra.” jedhan.
Kunis, waggoota didgaman dabran, faayidaan daldalaa Ertiraa waliinii dhabamee ture, kan deebi’ee itti jalqabame guyyaa dinqsiisaa akka tahetti dubbatan.
Gama biraan, Ertiraa fi Jabuutiin, hariiroo dippiloomaasumama gidduu isaanii tii yeroo dheeraaf citee ture, deebisanii tolfachuu fi nageenya giduu isaaniitti buusuuf walii-galuu isaanii – maddeen oduu mootummaa Itiyoophiyaa dubbatanii jiran.
Kan yeroo ammaa Jabutii jiran - Ministarri dhimma-alaa Itiyoophiyaa – Dr. Worqineh Gabayyoo, tarkaanfiin kun tarkaanfii seena-qabeessa akka tahe dubbatan.
Itiyoophiyaan Embaasii Ofii Asmaraa Keessatti Bante
Gaazexeessaa Hamzaa Booranaa jijjiirama biyyiti itti jirtu 'gadi dhaabuuf' Raadiyoo Daandii Haqaa fuudhee galuuniitti jira
Godiina Harargee Dhiyaa Keessatti Angawaan Oromiyaa Marii Gaggeessaa Jiru
Haallii Yeroo Ammaa Tigraay Keessaa Jiru Kan Itiyoophiyaa Iddoo Biraa Irraa Adda. Paartii Arenaa Tigraay
Jijjirama Argame Kan Fide Uummata: Prezidaant Lammaa Magarsaa